မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ်များ ငှားရန် | ShweProperty.com
ငှားရန် - M-0272 ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းတွင် (45x60)sqft…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (45x60)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(5)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(6)လုံး၊ပါကေးခင်း…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (45x60)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(1)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(5)ခန်း၊ အဲယားကွန်း(6)လုံး၊ပါကေးခင်း…
Property ID: S-1195407
Mobile no : viber-09421072285
ငှားရန် - M-0273 မင်းဓမ္မအိမ်ရာတွင် (120x100)sqft အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (120x110)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (120x110)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(၃)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…
Property ID: S-1195408
ငှားရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၈မိုင်ပြည်လမ်းသွယ်တွင်…
_ ပေ(50×50) _ Master bedrooms3_ Normal bedroom 1 _ Air-cons4_ ပါကေးခင်း _ RC2** ဈေးနှုန်း - 16 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ** ...
_ ပေ(50×50) _ Master bedrooms3_ Normal bedroom 1 _ Air-cons4_ ပါကေးခင်း _ RC2** ဈေးနှုန်း - 16 သိန်း (ညှိနှိုင်း) **
Property ID: S-1199257
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီရိပ်သာတွင်…
_ ပေ(35×70) _ Master bedrooms3_ Normal bedrooms3_ Air-cons6_ RC3** ဈေးနှုန်း - 25 သိန်း (ညှိနှိုင်း) ** ...
_ ပေ(35×70) _ Master bedrooms3_ Normal bedrooms3_ Air-cons6_ RC3** ဈေးနှုန်း - 25 သိန်း (ညှိနှိုင်း) **
Property ID: S-1199248
ငှားရန် - ဈေးနှုန်းတန်ပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ထားသော…
_ ပေ(36×85) _ Master bedroom 1 _ Normal bedrooms2_ RC2** ဈေးနှုန်း - သိန်း 20 (ညှိနှိုင်း) ** ...
_ ပေ(36×85) _ Master bedroom 1 _ Normal bedrooms2_ RC2** ဈေးနှုန်း - သိန်း 20 (ညှိနှိုင်း) **
Property ID: S-1199247
ငှားရန် - House Rent in South Okkalapa (ID-1273)
Four Stories house for rent in South Okkalapa Township, near Waizayana Road. Land area – 8400 sqft. House area is 2090 sqft, organized by Living-room, Five Master Bed-rooms, Maid-room, Two Office Room, Hall Room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. This house can use as Office. Asking price is 70 Lakh…...
Four Stories house for rent in South Okkalapa Township, near Waizayana Road. Land area – 8400 sqft. House area is 2090 sqft, organized by Living-room, Five Master Bed-rooms, Maid-room, Two Office Room, Hall Room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. This house can use as Office. Asking price is 70 Lakh…
Listed9May 2019
Property ID: S-1198848
ငှားရန် - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်လုံးချင်းငှားရန်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (9)မိုင် A.1လမ်းတွင် အကျယ်အဝန်း 4200 sqft ရှိသော RC နှစ်ထပ်တိုက်အားတစ်လလျှင် 18 သိန်းညှိနှိုင်းနှင့်ငှားရန်ရှိပါသည်။…...
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (9)မိုင် A.1လမ်းတွင် အကျယ်အဝန်း 4200 sqft ရှိသော RC နှစ်ထပ်တိုက်အားတစ်လလျှင် 18 သိန်းညှိနှိုင်းနှင့်ငှားရန်ရှိပါသည်။…
Property ID: S-1198249
ငှားရန် - M-0271 သံလွင်လမ်းတွင် (100x100)sqft အကျယ်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်အမြန်ငှားမည်။…
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (100x110)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(6)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…...
' View Point '' မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ (100x110)Sqft ရှိပြီး မာစတာအိပ်ခန်း(6)ခန်း၊ အဲယားကွန်း၊ ပရိဘောဂ၊ ပါကေးခင်း နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သည့်…
Property ID: S-1195405
Asking Price : 8,000 USD
ငှားရန် - လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော…
Land size 5500sqft , 3.5 building size 7000sqft ,7Master bed room ,2big living room , AC 13 . Office , Company , Private School , Private Hospital. Car park (6) . ပါရမီ ချော်တွင်းကုန်း လမ်းမ ပေါ် ရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ…...
Land size 5500sqft , 3.5 building size 7000sqft ,7Master bed room ,2big living room , AC 13 . Office , Company , Private School , Private Hospital. Car park (6) . ပါရမီ ချော်တွင်းကုန်း လမ်းမ ပေါ် ရှိသောကြောင့် လုပ်ငန်းများ…
Listed 30 March 2019
Property ID: S-1183243
Mobile no : 09260996994, 09402767111
ငှားရန် - Large Garden with3or4Bedrooms House in Golden Valley
For Rent - Large Garden with3or4Bedrooms House in Golden Valley is all you want ,--- Here we go -4Bedrooms - 1 Master Bedroom,2 Double Rooms and 1 Single Room - Good Natural Light - Very Beautiful and Large Garden -- Your kids will love it ! - Simple and clean structure - Wood Flooring Furniture…...
For Rent - Large Garden with3or4Bedrooms House in Golden Valley is all you want ,--- Here we go -4Bedrooms - 1 Master Bedroom,2 Double Rooms and 1 Single Room - Good Natural Light - Very Beautiful and Large Garden -- Your kids will love it ! - Simple and clean structure - Wood Flooring Furniture…
Property ID: S-1191390
Mobile no : 09426767567
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမကြီးအနီး…
ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမကြီးအနီး မြင့်ဇူလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်3းထပ်တိုက် ငှားမည် ။ ခြံအကျယ်…...
ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမကြီးအနီး မြင့်ဇူလမ်းရှိ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်3းထပ်တိုက် ငှားမည် ။ ခြံအကျယ်…
Listed 24 February 2019
Property ID: S-1188403
ငှားရန် - အေဒီ လမ်းဆုံအနီးရှိ ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်…
( 90 x 90 ) 3RC , 7MBR , 11A/C...
( 90 x 90 ) 3RC , 7MBR , 11A/C
Property ID: S-1159973
ငှားရန် - သံလွင်လမ်းသွယ်၊ ဦးအောင်ကိန်းလမ်းရှိ…
( 60 x 100 ) 2RC , 5MBR , 4BR , A/C...
( 60 x 100 ) 2RC , 5MBR , 4BR , A/C
ွှThan Lwin Road
Property ID: S-1159975
Asking Price : 4,500 USD
ငှားရန် - Code-8106 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ…
Listed 17 February 2019
Property ID: S-1190409
ငှားရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း၊မလိခအိမ်ယာရှိငှားရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku…
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ မလိခအိမ်ယာ ၊ ၆၀x၆၀ ၊ ၂.၅ထပ်ခွဲတိုက် ၊ မာစတာ၅ခန်း ၊ ရိုးရိုး၂ခန်း ၊ အဲကွန်း၁၀လုံး ၊ ပြင်ဆင်ပြီး ၊ 25…...
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ မလိခအိမ်ယာ ၊ ၆၀x၆၀ ၊ ၂.၅ထပ်ခွဲတိုက် ၊ မာစတာ၅ခန်း ၊ ရိုးရိုး၂ခန်း ၊ အဲကွန်း၁၀လုံး ၊ ပြင်ဆင်ပြီး ၊ 25…
Listed 8 February 2019
Property ID: S-1189695
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန်လုံးချင်းအိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
အလုံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဗဟန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဗိုလ်တထောင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒလ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဒေါပုံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
လှိုင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လှိုင်သာယာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လှည်းကူး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မှော်ဘီ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ထန်းတပင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် အင်းစိန် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကမာရွတ် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကော့မှုး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ခရမ်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကျောက်တံတား ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ကျောက်တန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လမ်းမတော် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် လသာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မရမ်းကုန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ပန်းပဲတန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ပုဇွန်တောင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် စမ်းချောင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ရွှေပြည်သာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် တိုက်ကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် တာမွေ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် သာကေတ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် သံလျင် ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် သုံးခွ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် တွံတေး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ရန်ကင်း ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်